हेर्दा मान्छेजस्तो लाग्थ्यो
मान्छेकै जस्ता दुई ओटा गोडा
मान्छेकै जस्तो आकृति
मान्छेकै जस्तो उभ्याइ, हिँडाइ र बोलाइ थिए उसका
लाग्थ्यो, त्यो मान्छे हो
एक दिन ऊ हाँस्तै
म नेर आउँदै थियो
म पनि मान्छे न हुँ
फिस्स हाँसि दिएँ
उसले मलाई च्याप्प समात्यो
ग्वाम्लाङ्ङ अँगालो मार्‍यो
मलाई चाट्न थाल्यो
म मक्खिएँ चाटिन पाएकामा
धेरै माया गरेको ठानेँ
उसले चाट्दै गयो,
म चाटिँदै गएँ
उसले धेरै चाटेपछि
मेरा गाला, हात, पाखुरा र गोडाका
जता छाम्दा पनि दुख्तो रहेछ
जता छाम्दा पनि पीडा नै हुँदो रहेछ
उसले चाट्ता चाट्तै
क्रूरताका डामहरु छोडि सकेको रहेछ
पीडाका स्मारकहरु खडा गरि सकेको रहेछ
झलक्क हेर्दा दयालु जस्तो
पुलुक्क चियाउँदा मायालु जस्तो
जिब्रो खस्रो भएको
गैँडा पो रहेछ
(Picture Source : Click Here)
लामखुट्टेहरू रगत चुसिरहेछन्
परजीवी हुनुको लक्षण
वर्षौँदेखी देखाउँदै आएका छन्
बिगो गर्नेले अमल तिर्नैपर्छ
सजायमा उनीहरू अर्मल पनि तिरिरहेछन्
रगत चुसिरहेका लामखुट्टेहरू देखेर
शोषणका उग्र विरोधिहरू
ठामका ठामै ठहरै पार्दैछन्
रगत चुसुवामा सुचिकृत गरेर
जतिखेर लामखुट्टेले रगत चुस्तै हुन्छन्
त्यतिखेर देखिने लामखुट्टेहरू
सूचीकृत हुदैँछन्, परमधाम जाँदैछन्
तर नदेखिने लामखुट्टेहरू
थाहै नपाई चुस्स टोक्ने लामखुट्टेहरू
बचेको बच्यै छन्
भिजिटरहरूको अर्कै खेती छ
तिनीहरू सयौँ वर्ष पुरानो
डी.डी.टी. छर्कने सल्लाह दिदैँछन्
मान्छेहरू डी.डी.टी. छर्कदैँछन्
प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्दैछ
जय खरपस !
यता हेर्छु खरपस देख्छु
उता हेर्छु खरपस देख्छु
म भोकाएको रहेछु
नाङ्गिइ सकेको रहेछु
ओत गुमाइ सकेको रहेछु
अब मलाई खरपसबाट मुक्ति
अब मेरा हातहरु खरपस नै खोज्छन्
अब मेरा गोडाहरु खरपस नै खोज्छन्
अब मेरा आखाँहरु खरपस नै खोज्छन्
त्यसैले अब म पनि
(Picture source:-Click Here)
आँखा ( लघुकथा )
‘के कम्प्लेन हो, तपाईँको ?’ एक सरकारी अस्पतालका डाक्टर आफ्नो रोगदेखि आत्तिएको रोगीलाई हल्का तरिकाले प्रश्न गर्दछन् ।
‘मेरो कानमा केही समयदेखि रातो देखिएको छ । दुख्तैन पनि र चिलाउँदैन पनि । पहिलेभन्दा फैलिएको पनि थाहा छैन । यस्ता रोगमा के के जाति रोगका लक्षण देखिन्छन् भन्ने सुनेर आएको हुँ ।’ रोगी आफ्नो रोगलाई राम्ररी हेरियोस् भन्ने आग्रहयुक्त बोली एकै सासमा तुर्याउँछन् ।
रोगीलाई आफ्नो अलि नजिक डाक्तै डाक्टर हल्कै तरिकाले हेर्छन् र भन्छन् ‘देखिँदैन त ?’
‘इ ! याँनेर डाक्टर साहेब !’ रोगीले रातै ठाउँमा देखाउँछ ।
‘खै, मैले त देख्तै देखिनँ।’ डाक्टरको उपेक्षित जस्तो जवाफ हुन्छ ।
यस घाउका बारेमा शङ्का भएपछि ‘ दुइटा प्राइवेट क्लिनिकमा यसको उपचार गराएँ तर ठिक भएन । त्यसैले यहाँ आएको हुँ ।’ यसभन्दा अघिको उपचारको स्थिति अवगत गराउँछन् रोगी ।
त्यसपछि डाक्टर प्रसन्न हुँदै भन्छन् ‘ए ! उसो भए मेरो पनि प्राइवेटमै आउनुस् न !’
( Source of photo :Click here )
एकजना स्वाभिमानी युवक बेरोजगारीले असाध्यै पिरोलिएको थियो । सकेसम्म त उसले आफ्नो मर्का आफन्तहरू समक्ष राख्न चाहेको थिएन । तर जागिर कहीँ नभेटेपछि ऊ आफ्ना मामानेर गयो । उसका मामा सत्ताको नजिक त छँदै थिए र शक्तिशाली पनि थिए । त्यसैले उसले मामानेर आफ्नो समस्याको पोको फुकायो । भान्जाको अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग मामा राम्ररी परिचित थिए । यस्तो स्थितिमा फाइदा उठाउन राजनीतिमा खप्पिस मामा के चुक्थे र ! मामाले भनी पनि हाले 'भान्जा ! जागिर त जहाँसुकै पाइन्छ तर भान्जाको विचार चाहिँ अलि ‍‍-----------। भान्जा चाहिँ अलि जिल्ल पर्यो र सोध्यो 'के भन्न खोज्नु भएको मामा, प्रस्ट भन्नुहोस् न !'
मामाले आफ्नो अभीप्सा पुरा हुने ठानेर जुङ्गामा ताउ लाउँदै भने 'मतलब, सत्ताधारी पार्टीको टिकट लिनु पर्यो ।'
आफ्ना मामाले समेत विचारको सौदाबाजी गर्न खोजेको देखेर भान्जा मामाको मुखमा हेर्या हेर्यै भयो ।
ऊ र यात्रा
रातो वर्णको सिकुटे अनुहार
मेरो आँखाअगाडि घरीघरी
बडो सक्रिय लाग्छ
हो, किन नहोस्
होस छ, जोश छ
अगाडि बढ्न खोज्छ
आएका आयै गर्छन्
रत्तिभर विस्मित हुन्छ
एकछिन टक्क अडिन्छ
यात्रा आरम्भ गर्छ
पुन: पुरानै गतिमा
काँडा छन् भन्ने थाहा छ उसलाई
तरबारमा टेकिन्छ भन्ने थाहा छ उसलाई
समय उसको अगाडि
झुक्छ भन्ने थाहा छ उसलाई
ऊ आफ्नो यात्रामा लाग्यो भने
केहीले लछार्न सक्तैन भन्ने पनि थाहा छ उसलाई
यात्रा नै सक्रियताको बाटो हो
सक्रियता नै सफलताको पाटो हो
त्यसैले अवरोधहरू आउँछन्
नुहेर जान्छन् उसलाई
अविश्रान्त पथिक बनेर
उसले शिखर चुम्नु छ
शिखर चुम्न सफल हुन्छ !
अनामग्राममा कुनै बेला दुईजना अचुक निसानाबाजहरु थिए । ती दुवैको सिकारपनामा कहिल्यै कमजोरी आउन पाएको थिएन । एक दिन ती दुवै सिकार गर्न सँगै जङ्गल पसेका थिए । एउटा घनघोर जङ्गलको माझमा पुगेपछि दुइटा बाटाहरू देखिए । एकजनालाई दायाँतिरबाट जाँदा सिकार पाइने लाग्यो र अर्कालाई बायाँपट्टिबाट ।
आ-आफ्ना निसानाको अचुकताले दुवैको अहम् चरमावस्थामा पुग्यो र ती एकै बाटाबाट अघि बढ्न नसक्ने भए । आखिर ती दुई छुट्टिए । ती दुवै झन्नै उस्तै गतिमा हिँड्दै थिए । दुवैले भिन्नाभिन्नै बाटामा कुनै वस्तुको सरसराहट सुने । ती दुवैलाई लाग्यो ‘सिकार पक्कै उनीहरूको नजिक आउँदै छ ।’ दुवैले आआफूले आवाज सुनेका दिशामा गोली छाडे ।
नीरव वनमा एक्कासि दुई ठूला आवाजहरू ध्वनन-प्रतिध्वनन भए ‘ड्याङ्ङ ! ड्याङ्ङ !!’ उनीहरू दुवैको निसाना अचुक नै थियो तर ती निसानाहरूका सिकार ...................!
( Source of Photo : Click here )
एक त्यान्द्रो गुन्द्रुक
दाँतलाई दु:ख दिइरहन्छ
जिब्रोलाई सक्रिय मात्र पारिरहन्छ
उतै केन्द्रित पारिदिन्छ
न त्यसै त्यसै बिलाउने
न हतपत बाहिर नै आउने
कस्तो अधबेस्रो यो
उकुच पल्टेको घाउजस्तो
भिरमा फलेको फर्सीजस्तो
न यसो गर्दा हुन्छ
न उसो गर्दा हुन्छ
यसले मलाई खालि दु:ख दिन्छ
न यो रहनुको प्रयोजन छ
न यो आफैँ मेरो मर्का बुझ्न प्रयत्नरत छ
स्वार्थ पूरा गर्न मात्र तयार देखिन्छ यो
पीडा दिन मात्र तयार भेटिन्छ यो
कस्तो यो कस्तो कस्तो
न यसोको न उसोको
एक त्यान्द्रो गुन्द्रुक !
कोही पाखाको मकै देखेर
थाप्लोमा हात राख्तै
धिक्कार्दै छन् आफूलाई
कोही मौसमी र
बेमौसमी तरकारी लाएर
सपार्दै छन् आफूलाई
कहिल्यै बत्ती ननिभ्ने पालुङसँग
कुम जोडेर पनि
विकासलाई आतुरतासाथ आत्मसात गर्ने
डाँडाबासको नाकैमुन्तिर रहेर पनि
अझै अँध्यारै छ कालीखोला
अन्तै अन्तैको विकासे खबर सुनेर
चित्त बुझाउन विवश छ कालीखोला
बिस्तारै छुन खोजेको छ कालीखोलालाई
झाँक्री बासँग मात्र
चित्त बुझाएर बस्तैन कालीखोला
नजिकैको ‘हेल्पोस’ पनि
धाउन थालेको छ कालीखोला
कालीखोलाको गति र
कालीखोले हावाको बहाव
बुझ्न खोज्दै छ कालीखोलाले
डोल्मा र पासाङहरु
जान थालेका छन् हिजोआज
पिरोलिन मात्र छाडेको छ कालीखोला
कठ्याङ्ग्रिन मात्र छोडेको छ कालीखोला
कालीखोला अब उठ्नेछ
उठिरहनेछ भालेको डाँकसँगै
उज्यालिने छ बिहानीको घाम जस्तै !!!
(Source of Photo:- Click Here )